Credit Credit Deynta Canshuurta Haysta Shaqaalaha - Amjambo Africa
Shaqo-bixiyeyaal iyo shaqaale badan ayaa la kulmay waqtiyo adag sanadkii la soo dhaafay. Dadaal ay ugu jirto sidii ganacsatada loogu fidin lahaa gargaar, waxay dowladdu u fidisay deyn iyo deeqo kala duwan oo ay dowladdu maalgeliso. Qaar ka mid ah barnaamijyadan gargaarka ah, sida Sanduuqa Soo noolaynta Makhaayadaha iyo Barnaamijka Ilaalinta Mushaharka, ayaa noqday kuwo caan ah, laakiin waxaa jira barnaamijyo kale oo ganacsiyada Maine ay ka faa’iideysan karaan sidoo kale. Midkoodna waa Deynta Canshuurta Haysta Shaqaalaha.
Waa maxay Amaahda Canshuurta Shaqaaleynta?
Credit Dhibcaha Canshuurta Haystaha Shaqaalaha (ERTC) waxaa markii hore lagu aasaasay Xeerka DARYEELKA bishii Maarso ee sanadka 2020. Ujeeddada amaahdu waxay ahayd in lagu dhiirrigeliyo loo shaqeeyeyaasha in ay ku sii hayaan shaqaalahooda mushahar, inkasta oo halganka aafada. Sharciga Qoondaynta Iskujira iyo Xeerka Qorshaynta Samatabbixinta Mareykanka ee dhawaan ayaa labaduba kordhiyay waqtiga kama dambaysta ah waxayna sii kordhiyeen u-qalmitaanka. Nooca ugu dambeeyay ee ‘ERTC’ wuxuu u oggolaanayaa ganacsiyada u qalma inay dalbadaan deynta mushaharka u qalma ee la siiyo shaqaalaha, sida mushahar bixinta iyo caymiska caafimaadka. Milkiilayaasha meheradaha u qalma ee Maine waxay sheegan karaan deyn ka dhan ah 70% mushaharka u qalma ee la siiyo shaqaale kasta, ilaa $ 10,000 shaqaale kasta rubuckiiba. Haddii shaqaaluhu ku kasbado $ 10,000 ama ka badan mushaharkiiba rubuc, loo-shaqeeyaha wuxuu heli doonaa deyn ah $ 7,000, maadaama taasi tahay 70% ee $ 10,000. Tan macnaheedu waa ugu badnaan shaqaale $ 28,000 ayaa noqon Kara amaahda loo siiyay loo shaqeeyaha 2021. Deyntan canshuurta ayaa si gaar ah faa’iido u leh maxaa yeelay maahan deyn kuwa qaataana waligood uma baahnaan doonaan inay dib u bixiyaan ama ay cafis weydiistaan lacagaha lagu aaminay.
Loo shaqeeyeha baa u qalma amahada canshuurta?
Si ganacsigu ugu qalmo amaahda canshuurta, shaqooyinka loo shaqeeyaha waxay u baahan yihiin in si buuxda ama qayb ahaan loo hakiyo amar dowladeed oo la xiriira masiibo; ama loo shaqeeyuhu wuxuu ubaahanyahay inuu la kulmay hoos udhac weyn ee rasiidhada guud (dhamaan lacagaha meheraddu qaadato, kahor intaan kharashaadka iyo canshuuraha laga jarin) faafida awgeed. Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka wuxuu go’aaminayaa hoos u dhac weyn inuu ka badan yahay 20% hoos u dhac rasiidhada guud ee saddexda bilood ah marka la barbar dhigo isla rubucaas 2019.
Sidee shaqo-bixiyeyaashu u sheegtaan amaahda canshuurta? Ganacsiyadu uma baahna inay buuxiyaan codsi loogu talagalay ERTC. Taa baddalkeeda, loo-shaqeeyayaashu waxay sheeganayaan amaahda canshuur celinta shaqaalahooda ee federaalka – badanaa markay tahay Foomka 941. Loo-shaqeeyaha wuxuu ku yareyn karaa lacag-dhigashada canshuurta mushaharka xaddiga amaahda. Haddii qadarka amaahdu ka badan yahay lacagaha cashuurta ah ee la dhigo inta lagu jiro rubuca, qadarka dheeriga ah ayaa la soo celin doonaa.
Haddii loo shaqeeye uu helay amaah PPP, meheraddu wali way dalban kartaa ERTC iyadoo la adeegsanayo Foomka 941-X, laakiin kaliya mushaharka u qalma ee aan lagu tirin cafiska amaahda PPP. Loo shaqeeye ayaa xaqiijin kara u-qalmitaankiisa iyo sida ay u codsan karaan ERTC adoo booqanaya websaydhka Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS). Qaybta ‘ERTC’ ee websaydhka IRS waxay sii iftiiminaysaa mushaharka u qalma, sida loo dalbado amaahda, saamaynta ay deynta ku yeelan karto qodobada kale ee gargaarka, iyo sida dib loogu noqdo sheegashada. amaahda, saamaynta deynta ay ku yeelan karto qodobada kale ee gargaarka, iyo sida dib loogu noqdo sheegashada amaahda ee sannadka 2020. Intaa waxaa dheer, si loo hubiyo u hoggaansamida iyo in ganacsiyada u qalma ee Maine ay si buuxda uga faa’iideysanayaan amaahda canshuurta, loo shaqeeyeyaasha su’aalaha qaba waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la xiriiraan xirfad yaqaan cashuur.
PreviousRe Sharciga Soo Noolaynta Makhaayada
NextMuraayadaada muraayadda waa wax ka badan quraarada!